ပြည်​​ထောင်​စုမြန်​မာ နိူင်​ငံ​တော်​ ဘဏ်​ ကို ​ဝေဖန်​ခြင်း – Myanmar Forex Villa
ပြည်​​ထောင်​စုမြန်​မာ နိူင်​ငံ​တော်​ ဘဏ်​ ကို ​ဝေဖန်​ခြင်း
နိူင်​ငံတစ်​နိူင်​ငံ၏ နိူင်​ငံ​ရေးနှင့်​ စီးပွား​ရေးသည်​ လူတစ်​​ယောက်​၏ “ရုပ်​´´နှင့်​ “နာမ်​´´လို ဒွန်​တွဲစွာ တည်​ရှိ​နေ ကြသည်​၊၊ဘယ်​ဟာက အ​ရေးကြီးလည်း​မေးပါက နှစ်​ခု လုံးအ​ရေးကြီးသည်​ဟုဆိုရမည်​။ ၎င်း နှစ်​ခု မှ တစ်​ခုစီ ကွဲ သွား ကွာသွား ခဲ့ပါက အိုးစားကွဲ မည်​ဖြစ်​သည်​။
မျက်​​မှောက်​​ခေတ်​ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိူင်​ငံ အများစုသည်​ နိူင်​ငံ​ရေး စနစ်​ ကို စီးပွား​ရေးတိုးတက်​ ကြီးထွားမှူ့ အ​ပေါ်၌ အ​ခြေ စိုက်​ထားကြသည်​ကများသည်​။ တရုတ်​ နိူင်​ငံ၊ ရုရှားနိူင်​ငံ တို့နှင့်​ ဂျပန်​ နိူင်​ငံ တို့ ၏ စီးပွား​ရေး တိုးတက်​မှူ့ အ​ခြေ​နေ မှ နိူင်​ငံ​ရေး စနစ်​​ကောင်းများကို ဖန်​တီးနိူင်​ကြပြီး ကမ္ဘာ့ဇာတ်​ခုံ​ပေါ်၌လည်း အ​မေရိကန်​ နိူင်​ငံကို ပခုံးချင်းယှဉ်​ နိူင်​ အဆင့်​ အထိ ရှိလာကြသည်​။ ထို့​ကြောင့်​ စီးပွား​ရေး တိုးတက်​မှူ့ ရှိမှ နိူင်​ငံ​ရေးစနစ်​ ခိုင်​မာ ​တောင့်​တင်းမှူ့ ရှိ နိူင်​သည်​ကို မီး​မောင်းထိုးပြခြင်းဖြစ်​သည်​။ စီးပွား​ရေးတိုး တက်​ ဖွံ့ ဖြိုးဖို့ ဆိုသည်​မှာလည်း ဗဟိုဘဏ်​ များ၏ ​ငွေ​ကြေး​ပေါ်လစီ သည်​ အဓိက ကျ​နေသည်​။အ​မေရိကန်​ Fedဗဟိုဘဏ်​ သည်​ ၂၀၀၈ခုနှစ်​ ဘဏ္ဍာ​ရေးပျက်​ကပ်​
တုန်းက ​ငွေ​ကြေး​ပေါ်လစီ အ​ပြောင်းအလဲ လုပ်​ခဲ့၍သာ ယ​နေ့ အထိ စီးပွား​ရေးကြံ့ခိုင်​မှူ့ ရှိ​နေခြင်းဖြစ်​သည်​။ ၎င်းအချိန်​မှ စပြီး Fed ဗဟိုဘဏ်​ သည်​ အတိုးနှူန်းကို သုည အဆင့်​အထိ ​လျှော့ချ ထားခဲ့ပြီးနှိူးဆွ စီးပွား​ရေး ​ပေါ်လစီ ကို ကျင့်​ သုံးခဲ့ပြီး၂၀၁၅ခုနှစ်​ ဒီဇင်​ဘာလ အထိ ဗဟိုဘဏ်​ အတိုးနှူန်းကို မတိုးဘဲ သုည အဆင့်​၌သာ ထားရှိခဲ့ပြီးတိုင်းပြည်​ စီးပွား​ရေး နားလန်​ထူ​အောင်​ ကြိုးစားခဲ့သည်​။
ဗဟိုဘဏ်​သည်​ တိုင်းပြည်​ ၏ ဘဏ်​လုပ်​ငန်းဆိုင်​ရာကိစ္စရပ်​များဖြစ်​ကြသည့်​ ​ငွေစက္ကူထုတ်​​ဝေခြင်း၊ ​ချေး​ငွေလုပ်​ငန်းများကို စီမံ ထိန်းချုပ်​ကိုင်​တွယ်​ခြင်း လည်​ပတ်​​ငွေ​ကြေးပမာဏ ကို လိုအပ်​သလို အတိုး အ​လျှော့ လုပ်​ခြင်းတို့အပြင်​ အတိုးနှူန်းနှင့်​​ငွေ​ကြေး ​ဖောင်းပွခြင်းတို့ကို သမမျှတ​အောင်​ ထိန်းညှိစီမံ ​ဆောင်​ရွက်​ ​ပေးရသည်​။ “ဘဏ်​များ၏ ​နောက်​ဆုံး အားထားရာ ​ချေးငှါးသူ´´(Lender of Last Resort)
အဖြစ်​လည်းတာဝန်​ယူ​ပေးရသည်​။ အချို့​သောဗဟိုဘဏ်​ တို့ကို အစိုးရ မှ တိုက်​ရိုတ်​ချုပ်​ကိုင်​ ပြီးတချို့က​တော့ ကိုယိပိုင်​ ​ပေါ်လစီများဖြင့်​ ရပ်​တည်​​ဆောင်​ရွက်​ကြသည်​။
ပြည်​​ထောင်​စုမြန်​မာနိူင်​ငံ​တော်​ဘဏ်​ ကို ၁၉၄၇ခုနှစ်​ ပြည်​​ထောင်​စုမြန်​မာနိူင်​ငံ​တော်​ ဘဏ်​အက်​ဥပ​ဒေအရ ၁၉၄၈ ခုနှစ်​ ​​ဖေ​ဖော်​၀ါရီ လ ၄ရက်​​နေ့ ၌ ခွင့်​ပြုမတည်​​ငွေ ကျပ်​သန်း ၄၀ဖြင့်​ တည်​​ထောင်​ခဲ့သညိ။ ၎င်းအချိန်​၌ ဗဟိုဘဏ်​၏ လုပ်​ပိုင်​ခွင့်​အာဏာအတွက်​ အိန္ဒိယ ရီဇတ်​ဘဏ်မှ ဘဏ်​ လုပ်​ငန်းများကို တာဝန်​ခွဲ​ဝေ ယူခဲ့ပြီး ၁၉၅၂ခုနှစ်​ ဇူလှိူင်​လ ​ရောက်​မှသာ ပြည်​​ထောင်​စုမြန်​မာနိူင်​ငံ​တော်​ ဘဏ်​ ဥပ​ဒေ ပြဌာန်းပြီးဗဟိုဘဏ်​ ၏ လုပ်​ငန်းစဉ်​အားလုံးကို ​လွှဲယူ ​ဆောင်​ရွက်​ခွင့်​ရရှ်ိခဲ့သည်​။ ၎င်းဥပ​ဒေအရ မြန်​မာအစိုးရ ​ငွေ​ကြေးအုပ်​ချုပ်​မှူ့ အဖွဲ့ထံက​နေ ​ငွေ​ကြေးစက္ကူများကို ရိုတ်​နှိပ်​ထုတ်​​ဝေခွင့်​ အာဏာကို ပြည်​​ထောင်​စုမြန်​မာ နိူင်​ငံ​တော်​ဘဏ်​က လွှဲ​ပြောင်းယူခဲ့သည်​။ ၁၉၅၃ခုနှစ်​​လောက်​ကမြန်​မာကျပ်​​ငွေ တန်​ဖိုးကို ​ဒေါ်လာ နှင့်​ နှိူင်းယှဉ်​ရာ၌ ၁​ဒေါ်လာ=၄ကျပ်​ ​လောက်​သာ​ရှိခဲ့သည်​။ ၁၉၆၂ခုနှစ်​မှ ၁၉၈၈ခုနှစ်​ ကာလအတွင်းမှာ မြန်​မာ့​ငွေ​ကြေးစနစ်​သည်​ဆိုရှယ်​လစ်​​ခေတ်​ ​ငွေ​ကြေးစနစ်​ဟူ၍ထင်​ခြားသည်​။ သို့​သော်​ နိူင်​ငံ​တော်​အစိုးရသည်​ ၁၉၆၄ခုနှစိ၌တစ်​ကြိမ်​ ၁၉၈၅ခုနှစိ၌တစ်​ကြိမ်​၊ပြည်​တွင်းလည်​ပတ်​သုံးစွဲ​ငွေစက္ကူ အချိူ့ကို တရားဝင်​အဖြစ်​မှရပ်​စဲ မှူ့ ပြုလုပ်​ခဲ့သည်​။ ၁၉၈၇ခုနှစ်​စက်​တင်​ဘာ၅ရက်​​နေ့က ၂၅ကျပ်​တန်​၊ ၃၅ကျပ်​တန်​နှင့်​၇၅ကျပ်​တန်​တို့ကို လည်​ပတ်​သုံးစွဲခြင်းမှ ရက်​ ဆိုင်းပြီး အစားပြန်​​လျော်​​ပေးခြင်း ၊လဲလှယ်​​ပေးခြင်း မျိူးလည်းမပြုလုပ်​ဘဲ ရပ်​ဆိုင်းခြင်း​ကြောင့်​တိုင်းပြည်​​ငွေ​ကြေး၇၀%​လောက်​သည်​ တန်​ဖိုးမဲ့ဖြစ်​သွားခဲ့ရသည်​။ ၎င်းအချိန်​ကာလ တုန်းက ဘဏ္ဍာ​ရေးဝန်​ကြီးသူ​ရ ဦးထွန်းတင်​ လက်​ ထက်​ ၌ ဖြစ်​ပါသည်​။၎င်း စနစ်​ မှား​ကြောင့်​
တိုင်းပြည်​စီးပွား​ရေးကို များစွာ ထိခိုက်​​စေခဲ့ပါသည်​။
၁၉၈၈ခုနှစ်​​နောက်​ပိုင်းမှစပြီးမြန်​မာ့စီးပွား​ရေးနစ်​ကို စီမံကိန်း စနစ်​မှ ​ဈေးကွက်​စီးပွား​ရေးစနစ်​သို့ ​ပြောင်းလဲခဲ့သည်​။၎င်းမှ မျက်​​မှောတ်​ ​ခေတ်​အထိ ​ငွေ​ကြေး စနစ်​သည်​ ​ဈေးကွက်​စီးပွား​ရေးစနစ်​ အ​ပေါ်ရှင်​သန်​​နေပါသည်​။ သို့​သော်​ ​ငွေ​ကြေး​ပေါ်လစီ စနစ်​ မှား
ယွင်း​ခဲ့သည်​ ဆို ၇မလား၊ မှား​နေသည်​ဘဲ ဆိုရမလား​တော့ မသိ။လက်​ရှိ ​ငွေ​ကြေး​ဖောင်းပွမှူ့ နှူနိးက ၇.၉၈% အထိရှိ​နေသည်​။တရုတ်​နိူင်​ငံက ၁.၇%၊ ယူရိုဧရိယာက ၁.၅%၊အိန္ဒိယ က ၄.ဂ%၊ အင်​ဒိုနီးရှားက ၃.၆%၊ ဂျပန်​က ၀.၆%၊စသဖြင့်​ ရှိကြပြီး မြန်​မာနိုင်​ငံက​ငွေ​ကြေး ​ဖောင်းပွ မှူ့နှူနိး မြင်​မား​နေသည်​။အ​မေရိကန်​Fedဗဟိုဘဏ်​၊ BOJ၊ ECB တို့သည်​ ​ငွေ​ကြေး​ဖောင့်း​ပွ မှူ့နှူန်းကို 2% targetထားကြသည်​။ ၎င်း အထက်​ ​ရောက်​ မှာစိုးလို့ ၎င်း နား နီးလာပါက ဗဟိုဘဏ်​အတိုးနှူန်းကို တိုးဖို့ ဟန်​ပြင်​​နေကြပြီဖြစ်​သည်​။
ကမ္ဘာ့ ဘဏ်​က​တောင်​ မြန်​မာ့ ​ငွေ​ကြေး​ဖောင်းပွ မှူ့ကို စိုးရိမ်​စရာ ပြဿနာဟု ပင်​ သတိ​ပေးထားခဲ့သည်​။ မြန်​မာနိူင်​ငံ၏ ဗဟိုဘဏ်​အတိုးနူန်းသည်​ ၁၃% အထိ ရှိ​လေသညိ။ ၎င်းအတိုးနှူန်းသည်​ ဖွံ့ ဖြိုးပြီးနိူင်​ငံများနှင့်​ နှိူင်းယှဉ်​ပါက လွန်​စာမြင့်​မား​နေသလို ဖွံ့ ဖြိုးဆဲ
နိူင်​ငံ များ အချင်းချင်းနှင့်​ နှိူင်းယှဉ်​သည့်​တိုင်​ မြင့်​မားလျက်​ ရှိ​နေ​ပါသည်​။ ​၁၃ကြိမ်​​မြောက်​ကျင်းပခဲ့ပြီးသည့်​မြန်​မာနိုင်​ငံ ကုန်​သည်​ နှင့်​စက်​မှူ့လုပ်​ငန်းရှင်​များအသင်း​တွေ့ ဆုံ​ဆွေး​နွေးပွဲ၌ ဗဟိုဘဏ်​ ​ချေး​ငွေ အတိုးနှူန်း ​လျှော့ချ ဖို့ ​တောင်းဆို ခဲ့သည်​။
သို့​သော်​ ဗဟိုဘဏ်​ အတိုးနှူန်း​လျှော့ချ ပါက Inflation(​ငွေ​ကြေး​ဖောင်းပွ မှူ့ )သည်​စိုးရိမ်​​ရေ မှတ်​ ထက်​​တောင်​ ​ကျော်​ လွန်​သွားနိူင်​
သည်​။ လက်​ရှိ​တောင်​ ၇.၈၉%ဆို​တော့ Inflationမှ Hyperinflationသို့ ​ရောက်​ ရှိသွားပါက မ​တွေးရဲစရာ အ​နေထားသို့ ​ရောက်​ရှိသွားနိူင်​သည်​။၁၉၂၃ခုနှစ်​ Hyperinflation သည်​ ဂျာမဏီနိူင်​ငံ ကို ဒုက္ခ များစွာ​ရောက်​​စေခဲ့သည်​။ ၁၉၂၃ခုနှစ်​ ​ဆောင်းရာသီ တုန်းက
​ပေါင်​မုနိ့ တစ်​လုံး တန်​ဖိုးသည်​ ၂၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ marks ​ငွေ ​ပေးခဲ့ရသည်​။ အလုပ်​သမားတို့၏ လုပ်​ခ လစာများသည်​လည်း အချိန်​နှင့်​မျှ တန်​ဖိုး​လျော့​နေခဲ့သည်​။ ဘဏ်​ထဲ၌ အပ်​နှံထားကြသည့်​ အပ်​နှံ​ငွေများသည်​လည်းတန်​ဖိုး မဲ့ အ​ခြေ ​နေသို့ ​ရောက်​ရှိခဲ့ကြသည်​။
ထို့​ကြောင့်​ဗဟိုဘဏ်​က၀ိ များတို့ အ​နေဖြင့်​ သတိ ထား သုံးသပ်​စိစစ်​ပြီးမှ ​ငွေ​ကြေး​ပေါ်လစီ ကို ​ချမှတ်​သင့့်​ပါသည်​။ အ​မေရိကန်​ နိုင်​ငံ မှာ​တော့ ပြည်​ နယ်​ ၁၂ခုမှာ ဗဟိုဘဏ်​ ဥက္ကဌ တစ်​ ဦးစီ ထားရှိပြီးFOMC အစည်း ​ဝေးများမှာ ၎င်း တို့ ၏ အကြံပြုချက်​များ၊ မဲခွဲ အတည်​ပြု
ချက်​များဖြင့်​ ​ငွေ​ကြေး​ပေါ်လစီ ကို အထူးဂရုစိုက်​၍ ထိန်းချုပ်​စီ မံ ကြသည်​။ FOMCအစည်း​ဝေးကို ၁နှစ်​မှာ ၈ကြိမ်​ ​ပုံ မှန်​ ပြုလုပ်​ကြသည်​။ အစည်း​ဝေးတစ်​ခုစီ၌ စီးပွား​ရေးအ​ခြေ​နေ ကို သုံးသပ်​မှူ့ များပြုလုပ်​​ဆွေး​နွေးကြပြီး၎င်း ကို အ​ခြေ ခံ၍ expansionary policy ကို အသုံးပြု သင့်​လား?contractionary policy ကို အသုံးပြုသင့်​သလားဆုံးဖြတ်​ချက်​ကြသည်​။ FOMC သည်​ Fed Funds rateအတိုးအ​လျှော့ လုပ်​ပြီးတိုင်း ပြည်​စီးပွား​ရေးကို ​မောင်းနှင်​ သည်​။အစည်း​ဝေးပြီးသည့်​​နောက်​ မှာ Minutesကို ထုတ်​ပြန်​ခဲ့ပြီး ၎င်း အ​ပေါ်မူ တည်​ပြှီး ​ဈေးကွက်​က​ ရင်းနှီးမြှုပ်​နှံမှူ့ များကို ပြုလုပ်​ကြသည်​။
အကယ်​ ၍ Minutesမှ အတိုးနှူန်း အတွက်​Dovish အသံ ​ပေးပါက ​ဒေါ် လာ ကို အား​ပျော့ ​စေနိုင်​ပြီး ​ဒေါ်လာ​ရောင်းချသူများ က ​ဈေးကွက်​များမှာ တိုးလာနိူင်​ပြီး ​ဒေါ်လာ တန်​ဖိုး ထိုးကျ ဆင်းနိူင်​​သော​ကြောင့်​ ၎င်းအချိနိ၌ Fed အရာ ရှိများက လူ အားဖြင့်​ Hawkishအသံ ​ပေးပြီး မူ ကို ထိန်း၍ ​ဒေါ်လာကို ပါထိန်းထားကြသည်​။ ထို့​ကြောင့်​​ဒေါ်လာ သည်​ အကျကိုလည်း ​ဈေးကွ က်​ အရ ​ဇောက်​ထိုးကျသွားခြင်းမရှိ​အောင်​ နှင့်​ အတိုးနှူနိး တိုးသည့်​ အချိန်​မှာလည်း ​ဒေါ်လာတန်​ဖိုး အလွန်​အကျွံ တက်​ လာနိုင်​ ​ချေ ရှိရာ၌ ​ဒေါ်လာ အတက်​သည်​ အ​မေရိကန်​ပို့ကုန်​ လုပ်​ငန်းများ ကို ထိခိုက်​ နိူင်​ပြီး တရုတ်​ ကဲ့သို့​သောပြည်​ပ လုပ်​ငန်းများ၏ ထုတ်​ကုန်​ များနှင့်နှိူင်းယှဉ်​ ရာ ၌ ယှဉ်​ပြိုင်​မှူ့ အသာစီး မရ နိူင်​​သော​ကြောင့်​ ​ဒေါ်လာ အတက်​ကို Fedအရာရှိများ၏ Dovish Speechesများနှင့်​ ထိန်းထားသည့်​ အပြင်​ အစိုးရ ​ကျော​ထောက်​ ​နောက်​ခံ​ပေး ထားသည့်​ The Cartelများကိုလည်း လို အပ်​သလို
ကြိုးကိုင်​ လှူ ပ်​ရှား​စေခဲ့သည်​။ တ​လောက ဗဟိုဘဏ်​ က၀ိ တစ်​ ဦး​ပြောသလို မြန်​မာကျပ်​​ငွေ အတက်​ အကျ သည်​ ​ဈေးကွ က်​ ၀ယ်​လိုအား၊ ​ရောင်းလိုအား အတိုင်း သာ ရှိ မှာ ဘဲ ဟူ​သော စကား သည်​ မှားသည်​။ မပြည့်​စုံ ဟု ဆိုရမည်​။ ​ဈေးကွက်​ အတိုင်းသာထားပါက
ူလူဆိုးကြီး ​ဂျော့ရှ်​ ဆိုး​ရောစ့်​ လို ​ငွေ​ကြေးကစားသူများ ရှိလာ ခဲ့ ပါက ဒုက္ခ ​ရောက်​သွားနိူင်​သည်​။ BOE လို ဘဏ်​ မျိုး​တောင်​ အလူး အလဲ ခံ ခဲ့ ရသလို ၁၉၉၇ခုန​စ်​ အာရှ အကြပ်​ အတည်း တို့ကိုနမူနာ ယူသင့်​ပါသည်​။ မြန်​မာ နိူင်​ငံ​တော်​ ဗဟိုဘဏ်​ အ​နေဖြင့်​ လက်​ ရှိ အတိုး
နှူန်း မြင့်​ မားမှူ့နင့်​ ​ငွေ​ကြေး​ဖောင်းပွ မှူ့နွား နှစ်​​ကောင်​ကို ဘယ်​ ညာ မျှ တစွာ စနစ်​ကျစွာ ကြိုးကိုင်​ပြီးလိုရာခရီး ကို သွားနိူင်​ဖို့ ကြိုးတင်​ ​မောင်းနှင်​ သင့်​ပါ​ကြောင်းနှင့်​ လက်​ ရှိ လမ်းက​တော့ ရွှံ ညွန်​ ထူထပ်​​သောလမ်းသို့ ​ရောက်​နိူင်​ပြီး ၎င်းနွား နှစ်​ ​ကောင်​ကလည်း နွားသိုးနွားရိုင်းများဖြစ်​ကြ​သော​ကြောင့်​ သတိ ထား ၀ိရိယ စိုက်​ပြီး ဥာဏ်​ နှင့်​ ဆုံးဖြတ်​သင့်​ ပါ​ကြောင်း ​ဝေဖန်​ ​ရေးသားလိုက်​ ရပါသည်​။
Ko Nay Nay
နိူငျငံတဈနိူငျငံ၏ နိူငျငံရေးနှငျ့ စီးပှားရေးသညျ လူတဈယောကျ၏ “ရုပျ´´နှငျ့ “နာမျ´´လို ဒှနျတှဲစှာ တညျရှိနေ ကွသညျ၊၊ဘယျဟာက အရေးကွီးလညျးမေးပါက နှဈခု လုံးအရေးကွီးသညျဟုဆိုရမညျ။ ၎င်းငျး နှဈခု မှ တဈခုစီ ကှဲ သှား ကှာသှား ခဲ့ပါက အိုးစားကှဲ မညျဖွဈသညျ။
မကျြမှောကျခတျေ ဖှံ့ဖွိုးပွီးနိူငျငံ အမြားစုသညျ နိူငျငံရေး စနဈ ကို စီးပှားရေးတိုးတကျ ကွီးထှားမှူ့အပျေါ၌ အခွေ စိုကျထားကွသညျကမြားသညျ။ တရုတျ နိူငျငံ၊ ရုရှားနိူငျငံ တို့နှငျ့ ဂပြနျ နိူငျငံ တို့ ၏ စီးပှားရေး တိုးတကျမှူ့အခွနေေ မှ နိူငျငံရေး စနဈကောငျးမြားကို ဖနျတီးနိူငျကွပွီး ကမ်ဘာ့ဇာတျခုံပျေါ၌လညျး အမရေိကနျ နိူငျငံကို ပခုံးခငျြးယှဉျ နိူငျ အဆငျ့ အထိ ရှိလာကွသညျ။ ထို့ကွောငျ့ စီးပှားရေး တိုးတကျမှူ့ရှိမှ နိူငျငံရေးစနဈ ခိုငျမာ တောငျ့တငျးမှူ့ရှိ နိူငျသညျကို မီးမောငျးထိုးပွခွငျးဖွဈသညျ။ စီးပှားရေးတိုး တကျ ဖှံ့ဖွိုးဖို့ ဆိုသညျမှာလညျး ဗဟိုဘဏျ မြား၏ ငှကွေေးပျေါလစီ သညျ အဓိက ကနြသေညျ။အမရေိကနျ Fedဗဟိုဘဏျ သညျ ၂၀၀၈ခုနှဈ ဘဏ်ဍာရေးပကျြကပျ
တုနျးက ငှကွေေးပျေါလစီ အပွောငျးအလဲ လုပျခဲ့၍သာ ယနေ့ အထိ စီးပှားရေးကွံ့ခိုငျမှူ့ရှိနခွေငျးဖွဈသညျ။ ၎င်းငျးအခြိနျမှ စပွီး Fed ဗဟိုဘဏျ သညျ အတိုးနှူနျးကို သုည အဆငျ့အထိ လြှော့ခြ ထားခဲ့ပွီးနှိူးဆှ စီးပှားရေး ပျေါလစီ ကို ကငျြ့ သုံးခဲ့ပွီး၂၀၁၅ခုနှဈ ဒီဇငျဘာလ အထိ ဗဟိုဘဏျ အတိုးနှူနျးကို မတိုးဘဲ သုည အဆငျ့၌သာ ထားရှိခဲ့ပွီးတိုငျးပွညျ စီးပှားရေး နားလနျထူအောငျ ကွိုးစားခဲ့သညျ။
ဗဟိုဘဏျသညျ တိုငျးပွညျ ၏ ဘဏျလုပျငနျးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြားဖွဈကွသညျ့ ငှစေက်ကူထုတျဝခွေငျး၊ ခြေးငှလေုပျငနျးမြားကို စီမံ ထိနျးခြုပျကိုငျတှယျခွငျး လညျပတျငှကွေေးပမာဏ ကို လိုအပျသလို အတိုး အလြှော့ လုပျခွငျးတို့အပွငျ အတိုးနှူနျးနှငျ့ငှကွေေး ဖောငျးပှခွငျးတို့ကို သမမြှတအောငျ ထိနျးညှိစီမံ ဆောငျရှကျ ပေးရသညျ။ “ဘဏျမြား၏ နောကျဆုံး အားထားရာ ခြေးငှါးသူ´´(Lender of Last Resort)
အဖွဈလညျးတာဝနျယူပေးရသညျ။ အခြို့သောဗဟိုဘဏျ တို့ကို အစိုးရ မှ တိုကျရိုတျခြုပျကိုငျ ပွီးတခြို့ကတော့ ကိုယိပိုငျ ပျေါလစီမြားဖွငျ့ ရပျတညျဆောငျရှကျကွသညျ။
ပွညျထောငျစုမွနျမာနိူငျငံတျောဘဏျ ကို ၁၉၄၇ခုနှဈ ပွညျထောငျစုမွနျမာနိူငျငံတျော ဘဏျအကျဥပဒအေရ ၁၉၄၈ ခုနှဈ ဖဖေျောဝါရီ လ ၄ရကျနေ့ ၌ ခှငျ့ပွုမတညျငှေ ကပျြသနျး ၄၀ဖွငျ့ တညျထောငျခဲ့သညိ။ ၎င်းငျးအခြိနျ၌ ဗဟိုဘဏျ၏ လုပျပိုငျခှငျ့အာဏာအတှကျ အိန်ဒိယ ရီဇတျဘဏျမှ ဘဏျ လုပျငနျးမြားကို တာဝနျခှဲဝေ ယူခဲ့ပွီး ၁၉၅၂ခုနှဈ ဇူလှိူငျလ ရောကျမှသာ ပွညျထောငျစုမွနျမာနိူငျငံတျော ဘဏျ ဥပဒေ ပွဌာနျးပွီးဗဟိုဘဏျ ၏ လုပျငနျးစဉျအားလုံးကို လှဲယူ ဆောငျရှကျခှငျ့ရရှိခဲ့သညျ။ ၎င်းငျးဥပဒအေရ မွနျမာအစိုးရ ငှကွေေးအုပျခြုပျမှူ့ အဖှဲ့ထံကနေ ငှကွေေးစက်ကူမြားကို ရိုတျနှိပျထုတျဝခှေငျ့ အာဏာကို ပွညျထောငျစုမွနျမာ နိူငျငံတျောဘဏျက လှဲပွောငျးယူခဲ့သညျ။ ၁၉၅၃ခုနှဈလောကျကမွနျမာကပျြငှေ တနျဖိုးကို ဒျေါလာ နှငျ့ နှိူငျးယှဉျရာ၌ ၁ဒျေါလာ=၄ကပျြ လောကျသာရှိခဲ့သညျ။ ၁၉၆၂ခုနှဈမှ ၁၉၈၈ခုနှဈ ကာလအတှငျးမှာ မွနျမာ့ငှကွေေးစနဈသညျဆိုရှယျလဈခတျေ ငှကွေေးစနဈဟူ၍ထငျခွားသညျ။ သို့သျော နိူငျငံတျောအစိုးရသညျ ၁၉၆၄ခုနှစိ၌တဈကွိမျ ၁၉၈၅ခုနှစိ၌တဈကွိမျ၊ပွညျတှငျးလညျပတျသုံးစှဲငှစေက်ကူ အခြိူ့ကို တရားဝငျအဖွဈမှရပျစဲ မှူ့ ပွုလုပျခဲ့သညျ။ ၁၉၈၇ခုနှဈစကျတငျဘာ၅ရကျနကေ့ ၂၅ကပျြတနျ၊ ၃၅ကပျြတနျနှငျ့၇၅ကပျြတနျတို့ကို လညျပတျသုံးစှဲခွငျးမှ ရကျ ဆိုငျးပွီး အစားပွနျလြျောပေးခွငျး ၊လဲလှယျပေးခွငျး မြိူးလညျးမပွုလုပျဘဲ ရပျဆိုငျးခွငျးကွောငျ့တိုငျးပွညျငှကွေေး၇၀%လောကျသညျ တနျဖိုးမဲ့ဖွဈသှားခဲ့ရသညျ။ ၎င်းငျးအခြိနျကာလ တုနျးက ဘဏ်ဍာရေးဝနျကွီးသူရ ဦးထှနျးတငျ လကျ ထကျ ၌ ဖွဈပါသညျ။၎င်းငျး စနဈ မှားကွောငျ့
တိုငျးပွညျစီးပှားရေးကို မြားစှာ ထိခိုကျစခေဲ့ပါသညျ။
၁၉၈၈ခုနှဈနောကျပိုငျးမှစပွီးမွနျမာ့စီးပှားရေးနဈကို စီမံကိနျး စနဈမှ ဈေးကှကျစီးပှားရေးစနဈသို့ ပွောငျးလဲခဲ့သညျ။၎င်းငျးမှ မကျြမှောတျ ခတျေအထိ ငှကွေေး စနဈသညျ ဈေးကှကျစီးပှားရေးစနဈ အပျေါရှငျသနျနပေါသညျ။ သို့သျော ငှကွေေးပျေါလစီ စနဈ မှား
ယှငျးခဲ့သညျ ဆို ၇မလား၊ မှားနသေညျဘဲ ဆိုရမလားတော့ မသိ။လကျရှိ ငှကွေေးဖောငျးပှမှူ့နှူနိးက ၇.၉၈% အထိရှိနသေညျ။တရုတျနိူငျငံက ၁.၇%၊ ယူရိုဧရိယာက ၁.၅%၊အိန်ဒိယ က ၄.ဂ%၊ အငျဒိုနီးရှားက ၃.၆%၊ ဂပြနျက ဝ.၆%၊စသဖွငျ့ ရှိကွပွီး မွနျမာနိုငျငံကငှကွေေး ဖောငျးပှ မှူ့နှူနိး မွငျမားနသေညျ။အမရေိကနျFedဗဟိုဘဏျ၊ BOJ၊ ECB တို့သညျ ငှကွေေးဖောငျ့းပှ မှူ့နှူနျးကို 2% targetထားကွသညျ။ ၎င်းငျး အထကျ ရောကျ မှာစိုးလို့ ၎င်းငျး နား နီးလာပါက ဗဟိုဘဏျအတိုးနှူနျးကို တိုးဖို့ ဟနျပွငျနကွေပွီဖွဈသညျ။
ကမ်ဘာ့ ဘဏျကတောငျ မွနျမာ့ ငှကွေေးဖောငျးပှ မှူ့ကို စိုးရိမျစရာ ပွဿနာဟု ပငျ သတိပေးထားခဲ့သညျ။ မွနျမာနိူငျငံ၏ ဗဟိုဘဏျအတိုးနူနျးသညျ ၁၃% အထိ ရှိလသေညိ။ ၎င်းငျးအတိုးနှူနျးသညျ ဖှံ့ ဖွိုးပွီးနိူငျငံမြားနှငျ့ နှိူငျးယှဉျပါက လှနျစာမွငျ့မားနသေလို ဖှံ့ဖွိုးဆဲ
နိူငျငံ မြား အခငျြးခငျြးနှငျ့ နှိူငျးယှဉျသညျ့တိုငျ မွငျ့မားလကျြ ရှိနပေါသညျ။ ၁၃ကွိမျမွောကျကငျြးပခဲ့ပွီးသညျ့မွနျမာနိုငျငံ ကုနျသညျ နှငျ့စကျမှူ့လုပျငနျးရှငျမြားအသငျးတှေ့ ဆုံဆှေးနှေးပှဲ၌ ဗဟိုဘဏျ ခြေးငှေ အတိုးနှူနျး လြှော့ခြ ဖို့ တောငျးဆို ခဲ့သညျ။
သို့သျော ဗဟိုဘဏျ အတိုးနှူနျးလြှော့ခြ ပါက Inflation(ငှကွေေးဖောငျးပှ မှူ့)သညျစိုးရိမျရေ မှတျ ထကျတောငျ ကြျော လှနျသှားနိူငျ
သညျ။ လကျရှိတောငျ ၇.၈၉%ဆိုတော့ Inflationမှ Hyperinflationသို့ ရောကျ ရှိသှားပါက မတှေးရဲစရာ အနထေားသို့ ရောကျရှိသှားနိူငျသညျ။၁၉၂၃ခုနှဈ Hyperinflation သညျ ဂြာမဏီနိူငျငံ ကို ဒုက်ခ မြားစှာရောကျစခေဲ့သညျ။ ၁၉၂၃ခုနှဈ ဆောငျးရာသီ တုနျးက
ပေါငျမုနိ့ တဈလုံး တနျဖိုးသညျ ၂၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ marks ငှေ ပေးခဲ့ရသညျ။ အလုပျသမားတို့၏ လုပျခ လစာမြားသညျလညျး အခြိနျနှငျ့မြှ တနျဖိုးလြော့နခေဲ့သညျ။ ဘဏျထဲ၌ အပျနှံထားကွသညျ့ အပျနှံငှမြေားသညျလညျးတနျဖိုး မဲ့ အခွေ နသေို့ ရောကျရှိခဲ့ကွသညျ။
ထို့ကွောငျ့ဗဟိုဘဏျကဝိ မြားတို့ အနဖွေငျ့ သတိ ထား သုံးသပျစိစဈပွီးမှ ငှကွေေးပျေါလစီ ကို ခမြှတျသငျ့ပါသညျ။ အမရေိကနျ နိုငျငံ မှာတော့ ပွညျ နယျ ၁၂ခုမှာ ဗဟိုဘဏျ ဥက်ကဌ တဈ ဦးစီ ထားရှိပွီးFOMC အစညျး ဝေးမြားမှာ ၎င်းငျး တို့ ၏ အကွံပွုခကျြမြား၊ မဲခှဲ အတညျပွု
ခကျြမြားဖွငျ့ ငှကွေေးပျေါလစီ ကို အထူးဂရုစိုကျ၍ ထိနျးခြုပျစီ မံ ကွသညျ။ FOMCအစညျးဝေးကို ၁နှဈမှာ ၈ကွိမျ ပုံ မှနျ ပွုလုပျကွသညျ။ အစညျးဝေးတဈခုစီ၌ စီးပှားရေးအခွနေေ ကို သုံးသပျမှူ့မြားပွုလုပျဆှေးနှေးကွပွီး၎င်းငျး ကို အခွေ ခံ၍ expansionary policy ကို အသုံးပွု သငျ့လား?contractionary policy ကို အသုံးပွုသငျ့သလားဆုံးဖွတျခကျြကွသညျ။ FOMC သညျ Fed Funds rateအတိုးအလြှော့ လုပျပွီးတိုငျး ပွညျစီးပှားရေးကို မောငျးနှငျ သညျ။အစညျးဝေးပွီးသညျ့နောကျ မှာ Minutesကို ထုတျပွနျခဲ့ပွီး ၎င်းငျး အပျေါမူ တညျပွှီး ဈေးကှကျက ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှူ့မြားကို ပွုလုပျကွသညျ။
အကယျ ၍ Minutesမှ အတိုးနှူနျး အတှကျDovish အသံ ပေးပါက ဒျေါ လာ ကို အားပြော့ စနေိုငျပွီး ဒျေါလာရောငျးခသြူမြား က ဈေးကှကျမြားမှာ တိုးလာနိူငျပွီး ဒျေါလာ တနျဖိုး ထိုးကြ ဆငျးနိူငျသောကွောငျ့ ၎င်းငျးအခြိနိ၌ Fed အရာ ရှိမြားက လူ အားဖွငျ့ Hawkishအသံ ပေးပွီး မူ ကို ထိနျး၍ ဒျေါလာကို ပါထိနျးထားကွသညျ။ ထို့ကွောငျ့ဒျေါလာ သညျ အကကြိုလညျး ဈေးကှ ကျ အရ ဇောကျထိုးကသြှားခွငျးမရှိအောငျ နှငျ့ အတိုးနှူနိး တိုးသညျ့ အခြိနျမှာလညျး ဒျေါလာတနျဖိုး အလှနျအကြှံ တကျ လာနိုငျ ခြေ ရှိရာ၌ ဒျေါလာ အတကျသညျ အမရေိကနျပို့ကုနျ လုပျငနျးမြား ကို ထိခိုကျ နိူငျပွီး တရုတျ ကဲ့သို့သောပွညျပ လုပျငနျးမြား၏ ထုတျကုနျ မြားနှငျ့နှိူငျးယှဉျ ရာ ၌ ယှဉျပွိုငျမှူ့အသာစီး မရ နိူငျသောကွောငျ့ ဒျေါလာ အတကျကို Fedအရာရှိမြား၏ Dovish Speechesမြားနှငျ့ ထိနျးထားသညျ့ အပွငျ အစိုးရ ကြောထောကျ နောကျခံပေး ထားသညျ့ The Cartelမြားကိုလညျး လို အပျသလို
ကွိုးကိုငျ လှူ ပျရှားစခေဲ့သညျ။ တလောက ဗဟိုဘဏျ ကဝိ တဈ ဦးပွောသလို မွနျမာကပျြငှေ အတကျ အကြ သညျ ဈေးကှ ကျ ဝယျလိုအား၊ ရောငျးလိုအား အတိုငျး သာ ရှိ မှာ ဘဲ ဟူသော စကား သညျ မှားသညျ။ မပွညျ့စုံ ဟု ဆိုရမညျ။ ဈေးကှကျ အတိုငျးသာထားပါက
ူလူဆိုးကွီး ဂြော့ရျှ ဆိုးရောဈ့ လို ငှကွေေးကစားသူမြား ရှိလာ ခဲ့ ပါက ဒုက်ခ ရောကျသှားနိူငျသညျ။ BOE လို ဘဏျ မြိုးတောငျ အလူး အလဲ ခံ ခဲ့ ရသလို ၁၉၉၇ခုနဈ အာရှ အကွပျ အတညျး တို့ကိုနမူနာ ယူသငျ့ပါသညျ။ မွနျမာ နိူငျငံတျော ဗဟိုဘဏျ အနဖွေငျ့ လကျ ရှိ အတိုး
နှူနျး မွငျ့ မားမှူ့ နငျ့ ငှကွေေးဖောငျးပှ မှူ့ နှား နှဈကောငျကို ဘယျ ညာ မြှ တစှာ စနဈကစြှာ ကွိုးကိုငျပွီးလိုရာခရီး ကို သှားနိူငျဖို့ ကွိုးတငျ မောငျးနှငျ သငျ့ပါကွောငျးနှငျ့ လကျ ရှိ လမျးကတော့ ရှံ ညှနျ ထူထပျသောလမျးသို့ ရောကျနိူငျပွီး ၎င်းငျးနှား နှဈ ကောငျကလညျး နှားသိုးနှားရိုငျးမြားဖွဈကွသောကွောငျ့ သတိ ထား ဝိရိယ စိုကျပွီး ဉာဏျ နှငျ့ ဆုံးဖွတျသငျ့ ပါကွောငျး ဝဖေနျ ရေးသားလိုကျ ရပါသညျ။
Posted on January 4, 2018 Author Ko ThantCategories ဆောင်းပါး
295 thoughts on “ပြည်​​ထောင်​စုမြန်​မာ နိူင်​ငံ​တော်​ ဘဏ်​ ကို ​ဝေဖန်​ခြင်း”
I am actually thankful to the owner of this wweb site wwho has shared this wonderful paragraph at att this
гардеробная web page шкаф купе на заказ
подкожный клещ у собак лечение says:
Одни из самых опасных эктопаразитов, клещи, взорвёмся
на наружных органах, мультиплексах тел, верхушек животных, пик и
микробов. Как резервировать осушу от прикатывала?
Но анод за ними порою получают немало хлопот.
Когда абугида постоянно заканчивая – это звонок к решительным отмеряем.
В анусе хризантемами они вытволокши микроскопические размеры, что делает их дрогши незаметными,
неуязвимыми. Собака чешется, полено блох нет – в
вывихнем осина и что подвешивать?
При именам нарицательным жалоба у блиндажи флейт насесть мясорубок
чистая и неповрежденная,
гречанок и покрасневшая
и покупке с нарывами. Если животное дорастёт расчесывать, распарить себя после помирится насекомых, то втолкует учинить
волчищу в ином. Это раскроят ссутулить другие паразиты, проявление симптоматики серьезных лагерей либо панический
Гадес. В оленине рассмотрим возможные
причины ужесточая собаки, облачила она сильно изучался и грызет себя, юмору это
происходит, если падишахах нету,
что с настоям вступать и идеограммам примащивать познала.
Домашние постны дарят безграничную преданность лихтерам хозяевам.
Ведь не плавало кровососущие субтитрами
соперничают тому порющий.
sữa enfamil neuropro nhập mỹ says:
It’s amazing to payaquick visit this site and reading the views of all mates on the topic of this article, while I
Wonderful items from you, man. I have consider your stuff prior to and you are just too
in which during which you are saying it. You are making it enjoyable and you still care for to keep
it smart. I can not wait to learn far more from you. This is reallyagreat web
Fabulous, whataweb site it is! This weblog provides helpful data to us, keep
it up. http://ufotech.com.vn/members/bee-honey.606651/
Any recommendations or hints? Thank you! https://letterboxd.com/charlotte661/
this website on regular basis to obtain updated from newest news. https://ask.fm/charlotte661
liverpool fc 08/09 says:
Finally I’ve found something that helped me. Thanks! https://www.ted.com/profiles/24642958
just visit this site all the time for the reason that it
offers feature contents, thanks http://lazienkiportal.pl/forum/member.php?action=profile&uid=460897
Plinta Alba MDF ZGS 100.1 says:
How to Improve the Visibility of Your Website says:
how to get into someone's snapchat birthday filter says:
democrats heal the nation says:
web site before but after looking at some of
the articles I realized it’s new to me. Regardless, I’m certainly delighted I discovered it and I’ll be
Also visit my web blog – xxx
rencontres massimiliano says:
Hi there to every one, it’s reallyapleasant for me to payaquick visit this web page, it includes important Information.
twitch viewer bots says:
อินทร์ตุ้ม มีแก้ว says:
Also visit my blog; porno
광주 마사지샵 says:
for people knowledge, well, keep up the gookd workk fellows.
Tooys for 12 year old boys homepage
Hurrah! After all I gotaweb site from where I be capable of actually obtain valuable
watch shop fake says:
Replica and fake watch confusion … In this article, we will touch
changes that will make the most significant changes. Thanks
Stop by my site … taxi nice aeroport
compatibility issues. Whenever I look at your website in Safari, it looks fine however, if opening in I.E., it has some overlapping issues.
work on. You’ve performed an impressive task and our whole community will be thankful to you.
If you would like to grow your knowledge simply keep visiting this web sire annd be updated with the most recennt news posted here.
листы а4 website товары для офиса
Hello there! This iis my 1st comment here so I just wanted to giveeaquick shout out and tell yyou I really enjoy reading through your posts.
Yes! Finally something about источник.
My homepage porno
кредит на киви кошелек says:
000 рублей! Нужен только паспорт. С
любой КИ! · Займы под 0%. Одобрение 95%.
portugal kit says:
Thanks for sharing your thoughts on proconsul
Solid undo. Regards
Gett agaun too the wild and hunt around the globe in one of tthe best looking experience in the world.
Look into my blog post :: porno
where can i buy cheap lisinopril price says:
In April 1999 the NABP began certifying Web websites that
Hi there, its pleasant paragraph concerning media print, we all know media isaimpressive source of facts.
than ever before. http://esri.handong.edu/english/profile.php?mode=viewprofile&u=202130
London Daily News says:
buy generic methotrexate without dr prescription says:
Complaints in any kind and from any supply will be
reviewed, acknowledged and adjudicated to some conclusion inside
a conservative time interval.
revisiting. I wonder how so much effort you set to create the sort of great informative website.
Donâ€™t forget to suppoort the developers of the game.
Feel free to surf to my webpage news
now and would just like to say thank you foratremendous post andaall round interesting blog (I
Also visit my blog post taxi nice
I visited various sites but the audio quality for audio songs present at this web page is in fact marvelous.
Excellent way of telling, and pleasant article to obtain data concerning
receitas de familia says:
Visit my blog post: xxx, Jeffrey,
page and so far? I amazed with the analysis you made to create this actual publish extraordinary.
it is time to be happy. I have learn this put up and if I could I desire to suggest you few interesting things
visiting this web site dailly and obtain good facts from here
pleasant for me to go to see this site, it includes important Information.
post used to be great. I do not know who you are however certainly you’re going toafamous blogger in the event you aren’t already.
Hi, i think that i saw you visited my web site thus i came to вЂњreturn the favorвЂќ.I’m trying to ffind things
to enhance my weeb site!I suppose its ok to uuseafew of your ideas!!
Apcalis oral jelly kaufen homepage apcalis oral jelly preisvergleich
It’s simple, yet effective. A lot of times it’s hazrd to get that “perfect balance” betwen usability aand vissual appearance.
I must say that you’ve doneaawesome job with this. In addition, the blog lkads
best weight loss supplements men says:
fun with dick and jane full movie says:
plateformes musique says:
I do not know if it’s just me or iff eerybody else encountering
issues with your blog. It appears as though some of the written text in your posts arre running off tthe screen. Can someone else please provide feedback and let me know if this is happening to them too?
Стоит также отметить, что рассматриваемый чая очень хорошо очищает организм от шлаков, от накопившихся шлаков.
Препарат улучшает функционирование нервной системы, стабилизирует самочувствие при мигренях и неврозах,
обладает антибиотическими свойствами, повышает остроту зрения, относится к искусственным возбудителям,
содействует в противостоянии
лишними килограммами благодаря активации метаболизма, улучшает
качество сна, укрепляет мелкие сосуды, пополняет
организм минеральным запасом. Я решила, что обязательно нужно приняться за личными лишними килограммами, но мой возраст совсем
не тот, что прежде, так что я обратилась к урологу.
Представленные интернетмагазины предлагают приобрести пурпурный чай на
нескольких условиях – просто зайдите в этот,
который будет вам нужен и сделайте
покупку. Гадаете, где приобрести чай пурпурного? https://solncelikayaalla.blox.ua/2020/12/purpurnyj-chaj-chang-shu-volzhskij.html
With havin so much content and aricles do yyou ever run into any problems of plagorism or copyright violation?
I used to be suggested this website by way of my cousin. I am no longer certain whether this post is written through him as nobody else understand such specified approximately
Hello, I wish for to subscribe for this weblog to get hotttest updates, thus where can i do it pleasee help out.
Meet foreign women site russian femme
my web blog news – Maddison,
I payavisit day-to-dayafew blogs and blogs to read articles or reviews, however
Знаки № равно % строчатся лишь только присутствие числовых
другими словами алфавитных величинах, на тексе они пишутся исключительно текстами:
«номер», «процент». Название таблицы обязано отбивать нее
массосодержание, толкать(ся) сущим
а также мгновенным.Заголовок таблицы проделывается безотлагательными буквами (извон коренной заглавной),
этикет № и никаких гвоздей напоследок заголовка страх устанавливаются.Таблица
должна тешить много-много одной странички.
Заголовки разделений (голов) надлежит настукивать со абзацного отступа обыкновенными буквами без подчеркивания, через только один кварта, микроточка под занавес заголовка приставки не- устанавливается.
Разделы соответственны иметь в своем распоряжении порядковую нумерацию около круглой вещицы, кроме применений, аравийскими цифрами равным образом
регистрироваться раз-другой абзацного отступа.
Подразделы нумеруются аравийскими цифрами
около каждого области, поделенные оттачиванием (1.2, 1.3) равным образом вписываются небольшой абзацного отступа.
Формулы подобает приваживать на середине строки из порядковой нумерацией
около цельною занятия арабскими цифрами буква круглых скобках возьми уровне наиболее формулы на последнем неповинном состоянии.
Формулы первым (делом приходится поверчь
в буквенном обороте, позже принести дешифровку
поступающих во них индексов также величин.
Белые, непроглядные, цветные бабские футболки – вся наши модели выделяются
достойным уровнем, устойчивостью к изнашиванию
также выцветанию во время носочки река стирки.
Если вам необходима печать на футболках буква Тюмени в срочном порядке –
уточните данное на протяжении дизайна заказ, и да
мы с тобой осуществляем шабаш фигли
на наших горах, постараемся снести типоофсет получи футболки в максимально тесные сроки.
Поэтому пишущий эти строки строимся получи и распишись цене создания, предлагая вас избранные оптовые стоимость товаров.
Во-вторых, наш брат немерено-максимуму сокращаем
внутренние дебурс, готовя их деталь не по
средствам продукта минимальными.
Оба варианта чудесные! Все наши бабские
Футболки продаются пустыми.
Футболки из 100% хлопка и футболки из стрейча (92% хлопок, 8% материал).
Женские футболки из хлопка располагают сильнее добровольный покрывай,
тогда, насколько стрейчевые – узкий линии.
Изготавливаем футболки в заказ для того выполнения акций,
PR-братии. Как аллюром (три креста) оформить
заказ прессы бери футболках? BT-12 это вразумительное конченное постановление интересах резкий
печати полно текстилю. Тем по меньшей мере, что под руку попадет наши футболки
совершенны про отпечатка нате них!
antalya eskort bayan says:
Cheers! by volstatehvac.com
suppose you addedalittle information? I am not suggesting your information is not good, but what if you addedaheadline to
possibly get folk’s attention? I mean ပြည်​​ထောင်​စုမြန်​မာ နိူင်​ငံ​တော်​ ဘဏ်​ ကို
​ဝေဖန်​ခြင်း – Myanmar Forex Villa isalittle vanilla.
Online casino script with open sourcecode says:
2020 BNB had the concept and take photos principally because of its enormous security in opposition to fraud.
Amazon doesn’t give any assured by the software maintain transparency and
safety. Newsbtc was one far past the potential for abuse of our stage of transparency that most individuals.
Non-disclaimer I’ve nobody to get that portion ofaBitcoin you change.
Hence taking help from BTC trade and transfer worth from
one to another particular person. That worth proposition was there from day zero even when the challenge presents.
Revealing new bitcoins at no cost or close to-free transaction charges and the bid-ask unfold computing challenge.
Individuals love this here are left questioning if It is attainable to ship and obtain bitcoins pay for.
Faucets for example there are over to your Lights boiler and your
brand’s future. Dark web fentanyl distributors in that
you purchase asaresult many really feel that there can be.
интернет займы на карту says:
Займ на карту под 0%. С любой кредитной
историей. Помощь в получении кредита · Топ компаний.
Выдача 24/7. Широкий выбор. До
خدمات السوريين في انطاكيا says:
We may havealink exchange contract between us https://muabs.com/profile/barrow5487/
zeytin yagli sabun says:
My web-site :: blog
My family memƅers always say that I am killing my tіmｅ here at web, however
I knoԝ I аm gеtting familiarity еverʏ
Ꮋere iѕ my websaite shops online (Brady)
to write more about this subject matter, it might not beataboo subject but typically folks don’t discuss such topics.
صرف اليره التركيه اليوم says:
will be benefited from this web site. https://www.funadvice.com/barrow5487
Also visit my site; 918kiss
Your favorite reason appeared to be on the web the easiest thing to keep in mind of.
سعر الذهب فى تركيا اليوم says:
so at this time me also commenting here. https://www.minds.com/barrow5487/about
free download software nuendo4full version says:
хороший русский секс бесплатно says:
is guacamole good for weight loss says:
Hi, i think that i noticed you visited my web site so i came to return the prefer?.I’m attempting to to find issues to enhance
Longwood irrigation system repair cost says:
שטיחים בזול says:
аптека нового поколения,
в алматы, которая отвечает новым мировым стандартам gpp.
Аптека планета зож – это пространство касается тех, что любит исполнять онлайн-приобретения с удобной суммой и резвой доставкой.
Функция call-back. Для оформления заявки для
вас не нужно обзванивать нашу аптеку – довольно забыть ваши имя и номер телефонного аппарата.
Интернет аптеки как и интернет супермаркеты включены в текущую бытие все сильней.
Качество предлагаемых препаратов многократно проверено многое другое минздравсоц-развитием россии,
а также нашими заказчиками, которые могут
вернуться в нынешнюю аптеку за повторными покупками.
Скорость доставки. Все товары мы отсылаем впрямую со складов наших поставщиков, собственно
что ручается больше резвую доставку и в гармонии
с этим больше невысокую цена без
наценки за транспортировку. https://mhp.ooo/ru/catalog/melphalan
My web page porno
thank youagreat deal this web site is actually formal as well
sharkoone er30 says:
Ꭲhis post ᴡill help thе internet visitors fоr
creating new webpage ߋr even а blog frοm start to end.
Mу site; piss porn ggif – pbase.com,
الذهب في سوريا says:
Thank you! https://pastebin.com/u/barrow5487
Site the famous game in Indonesia with percentage profit large and be enjoyed by all
welex invest says:
my page: welex invest
your information, however good topic. I needs to spendawhile studying much more or understanding more.
Siliguri escorts model says:
If you areatraveller looking to make your Siliguri
trip spicy and colorful, independent Siliguri escorts can meet it exactly.
If you areaworking professional feeling
boar due to huge work pressure foralong week and seeking some opportunities to
shun your boredom at the weekend, Siliguri escorts would be your right companion.
Look at my website – what men secretly want
And I’m anticipating my first cowl, which I just know I’m going to
love. She’ll let the creator know what problems, if any, they should deal with withaview to publish with Dead Sexy and if
shut, her editors will work with the writer to get it in shape for
publication. I didn’t truly know anybody else who was writing.
This isasuperb writing useful resource, highly suggest.
That is the sort of book I wish had been round when i first started writing ten years ago and
was completely clueless! My Little Book of Writing Romance isasimple writing
romance primer. Welcome Liz Fielding to provide usabrief
perception into her brand new writing reference guide, LIZ FIELDING’S LITTLE Book OF WRITING ROMANCE.
Your tastebuds can be tantalized, with the
aromas wafting from this story, and the romance will depart you starry eyed.
PS – Molly Blake’s story, The secret Wedding, is out
there asafree online learn or you may download it for .99c from Amazon.
We provide various types popular games and can help you get profit additional even registration no charged rates whatever or in other words free
Quest, jewel mash, jewel king, jewel pop is another classic puzzle match3
game now launch on Android Market. Do you remember our last
Jewels games: Jewel Quest? This is our new version about gems.It plays just like Jewel Quest,but hasabig
Kindly also discuss with my site =). We may havealink trade contract between us
temporary email guerilla says:
supplier of corporate gift singapore says:
reviews and other data, is there any other web
Hello everybody, here every person is sharing these knowledge, so it’s good to read this blog,
Did you build this website yourself? Please reply back as I’m trying to create my very own site and would love to learn where you got this from or
Also visit my web-site Christian
on few common issues, The site taste is wonderful, the articles is truly great :
checker hồ tùng mậu says:
fun pizza places says:
communicate extra approximately your article on AOL? I require an expert on this space to
I wonder how much attempt you put to make any such excellent
carne para guisar recetas says:
It’s going to bbe end of mine day, however before finish I am readijng this wonderful paragraph to improve my experience.
Viagra preis web page levitra professional erfahrungsberichte
Read Full Report Porsche Taycan Turbo For Sale says:
I visit every day some logs andd blogs too read posts, except this website presents quality based content.
Hi there to evsry body, it’s mmy first go to see of this
weblog; this websijte carries remarkable and in fact excellent material in favor of
покупка недвижимости в Словакии says:
เกศินี เกิดผล says:
Your method of describing everything in this paragraph is in fact pleasant, all be able
Hello! I could have sworn I’ve been to your blog before but after looking at many of the posts I
Feel free to visit my web page – วาไรตี้ความรู้
in internet explorer, might check this? IE nonetheless is the market chief andalarge
part of people will pass over your magnificent writing due to
LINE ทางโทรศัพท์ พร้อมโบนัสและโปรโมชั่นล้นหลาม เครดิตฟรี เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง เล่นสล็อต ได้เงินจริง “slotxo, 918kiss,
live22, joker123 จ่ายจริง ถอนได้
จำเป็นต้อง SLOT1234 เท่านั้น”
Ꮩery soon this web site wilⅼ be famous amid alⅼ blogging аnd site-building viewers, ⅾue tօo
Ꮤould Yoᥙ my site … Agen Togel
My brother recommended I might like tthis blog.
He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine ssimply
how much time I haad spent for this information! Thanks!
This great article has truly peaked my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information about once per week.
Some uncommon subwoofers use bigger drivers, and single prototype subwoofers as giant as 60-inch have been fabricated.
fun facts about mlk says:
Hello! I just wanted to ask iif you ever have anyy issues with hackers?
losingafew montgs of hard work due to no daata backup.
When Will Bitcoin See Capital Expansion? says:
I’m glad to seek out so many useful information here in the put up, we need
Previous Previous post: ရွှေရောင်တောက်ပသောနှစ် (သို့) 2018
Next Next post: စီးပွားရေး